ပေါင်မြို့တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်၊ စိန်ရတနာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူ၊ အမျိုး? - Yangon Media Group
ပေါင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ပေါင်းရပ်ကွက် စိန်ရတနာကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာဇောတသည် ၎င်း၏ဇာတိမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းရေစက်ချ ပွဲသို့ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် တပည့် ဒါယကာ ငါးဦးနှင့်အတူြ<ွကရောက် စဉ် နေပြည်တော်-မန္တလေး အမြန် လမ်းမကြီးပေါ်၌ ယာဉ်တိမ်းမှောက် မှုကြောင့် ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော် မူခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း ဆရာတော်၏ ဒါယကာ ဒါယိကာမများထံမှ သိရသည်၊၊
ဖြစ်စဉ်မှာ နေပြည်တော်-မန္တလေးလမ်းမိုင်တိုင် (၂၈၇/၃) နှင့် (၂၈၇/၄) အကြားတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် ညနေ ၃ နာရီက ယာဉ်မောင်း အောင်ခိုင်စိုး(၃၄)နှစ် ခင်ဦးမြို့နေသူ မောင်းနှင် လာသည့် 6K/4— Toyota Succeed ယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်း နိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်ရာမှ ဆရာ တော် ဦးပညာဇောတ သက်တော် (၇၃)နှစ် ဝါတော်(၅၃)ဝါသည် အခင်း ဖြစ်ရာနေရာတွင်ပင် ပျံလွန်တော် မူခဲ့ပြီး ဆရာတော်နှင့်အတူ လိုက်ပါလာသော မစိုးငြိမ်းချမ်းသော်(ခ) မမေသင်္ကြန်မိုး(၂၁)နှစ် ပေါင်မြို့နေသူသည်လည်း အခင်းဖြစ်နေရာတွင်ပင် သေဆုံးခဲ့သည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်စဉ် ကြောင့် ယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါ လာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ဆရာတော်၏ ဥတုဇရုပ် ကလာပ်အား တပည့်ဒါယကာများ က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် ညနေ ပိုင်းတွင် ပေါင်မြို့ရှိ စိန်ရတနာ ကျောင်းတိုက်သို့ ပြန်လည်ပင့် ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်၊၊ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ လူကို သေစေပြီး နာကျင်ဒဏ်ရာရရှိသည် အထိ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင် သူယာဉ်မောင်းအား အမြန်လမ်းမ ကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ-၃ဝ၄(က)/၃၃၇ အရ အမှု ဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထား ကြောင်း သိရသည်၊၊
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း တရားမဝင်သစ်များကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် တင်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုမျ??